Ikhasi lasekhaya - UMW Youtai Semiconductor-umkhiqizo owaziwayo wokuphathwa kwamandla wasekhaya IC, i-optocoupler, i-LDO, i-MOS enamandla aphakathi nendawo kanye namandla aphezulu.
Sawubona! Uyemukelwa ukuvakashela iwebhusayithi yethu esemthethweni!
Ifektri ifaka indawo engamahektare angama-20, enendawo yokwakha eyi-12,000 square metres nabasebenzi abangaphezu kwe-120.
Uhla oluphelele lwemikhiqizo esetshenziswa kakhulu, ehlanganisa izigaba ezingaphezu kwezingu-20, izixazululo ezahlukahlukene nezikhulile, ukuhlinzeka abasebenzisi ngemikhiqizo nezinsizakalo ezingabizi kakhulu.
Ikhwalithi ngemuva kokuthengisa
Ukusekelwa kwensizakalo yokuthengisa ngemuva kwamahora angama-24, ukwesekwa kwezobuchwepheshe kwe-FAE ephezulu, ukuxazulula izinkinga zamakhasimende okokuqala, ukwaneliseka kwamakhasimende kuyinjongo yethu yokuqala.
Gxila kuzidingo zamakhasimende, qhubeka nokwandisa inani lemikhiqizo, futhi wenze imizamo eqhubekayo yokuhlangabezana nezidingo zamakhasimende.
Linear Isilawuli Chip
I-Youtai Semiconductor igunyaza u-Youjinxincheng njenge-ejenti esemthethweni
Ukuze kuqinisekiswe ukulethwa kwama-chips, uTesla noHon Hai kunamahemuhemu okuthi bazothatha izindwangu ze-Macronix 6-inch
Usihlalo wenkampani ye-chip: Angikholwa ukuthi amakhasimende afuna ama-chips kuphela, ngaphandle kwentengo
Iphrojekthi yezimayini zemali / iphakethe le-ASE lidlulisa ukukhuphuka kwentengo kwikota elandelayo
Ukushoda kwe-Chip! UWeilai Automobile umemezele ukumiswa kokukhiqizwa